Home Wararka Maanta CC Shakuur iyo Cabdullaahi Kulane oo tagay Dhuusamareeb + Ujeedka
CC Shakuur iyo Cabdullaahi Kulane oo tagay Dhuusamareeb + Ujeedka
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdillaahi Aadan Kulane oo kamid ah saraakiisha sare ee NISA ayaa maanta si kala gooni ah uga dagay Dhuusamareeb.
Hogaamiyaha Wadajir ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay Wasiiro, Xildhibaano ka tirsan DF iyo kuwo dowlad goboleedka Galmudug, Saraakiil, Odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Sidoo kale, Kulane oo asagu ka yimid dhanka Caabudwaaq oo maalmihii dambe uu ku sugna ayaa waxaa Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay ciidamo iyo gaadiid fara badan oo ay ku jiraan kuwa dagaalka, waxaana la dejiyay gudaha magaalada.
Cabdiraxmaan iyo Kulane ayaa ah labo nin oo aad ugu kala fog siyaasada, ayada oo mararka qaarna la soo wariyo inay ka dhaxeyso xurguf gaar ah, waxaana maanta ku kulmiyay Dhuusamareeb kuraas ay doorashadoodu halkaas taallo.
Kulane ayaa u sharaxan kursiga uu tirsigiisu yahay HOP#040, kaasi oo ay hadda ku fadhido Xildhibaanad Nafiiso Faarax Jaamac.
Hogaamiyaha Wadajir ayaa sidoo kale lasoo warinaya in uu doontay kursiga uu tirsigiisu yahay HOP#138, kaasi oo uu hadda ku fadhiyo Xildhibaan Saciid Nuur Qayliye (Siciid Giriish).
Labadan kursi ayaa kamid ah kuraas uu guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug uu shaaciyay 5-tii bishaan, sida uu qorshuhu yahayna waxaa doorashadooda la qaban doona 13-ka iyo 14-ka bishaan.
Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa maalinta Sabtida bilaabi doona qabashada araajida iyo diiwaan-gelinta musharaxiinta kuraastaas.